Antenimierandoholona : sy fahaizana politika ny fanjakazakan’ny HVM | NewsMada
Antenimierandoholona : sy fahaizana politika ny fanjakazakan’ny HVM
Mazava ny vokatra vonjimaika, raha ny fifidianana loholona. Hanjaka tokana eny amin’ny Antenimierandoholona ny HVM. Tsy fahaizana politika…
Toerana enina amin’ny 42 no hifampizaran’ny antoko hafa ivelan’ny HVM amin’ny fifidianana loholona, raha ny vokatra vonjimaika. Mety ho lasan’ny HVM aza ny toerana 57 amin’ny 63 mandrafitra ny Antenimierandoholona, raha izao ny fandehany.
Asa izay ho fomba hanendren’ny filohan’ny Repoblika ireo loholona 21 avy aminy, ho araka ny And. 81 amin’ny lalàmpanorenana na tsia? Misolo tena ireo vondron-draharaha ara-toekarena sy sosialy ny loholona, rehefa tsy voasolo tena tanteraka ihany ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana amin’ireo loholona eo: very zo ireo olom-boafidy eny anivon’ny faritra sy ny faritany.
Hanatevin-daharana ny HVM mba hanjaka tokana ve ny hotendrena? Na tsy ho izany aza, ampoizina hivadika ho HVM noho ny toerana izay voatendry eo. Ho tonga hatraiza na midika inona izany?
Ilaina ny mpanohitra
Aleo indramina ny fanehoan-kevitry ny mpahay hary na toekarena, Rajohnson Hugues, tamin’ny mpanao gazety teny Anosy, ny 22 jolay 2015, tamin’ny fifanatrehan’ireo kandidà ho ben’ny Tanàna, Antananarivo Renivohitra. “Ny nampiongana ny filoha Tsiranana: 99% ny vato azony, azy avokoa ny depiote sy ny ben’ny Tanàna rehetra. Toy izay koa ny amiraly Ratsiraka, azy avokoa ny olom-boafidy, dia niongana izy. Toy izany koa Ravalomanana”, hoy izy.
Tsy fahaizana politika ny fananana olom-boafidy be loatra. Ilaina ny mpanohitra. Eo amin’ny fanoherana no ahafahana manitsy ny lalan-kaleha. “Fa raha vao tsy misy mpanohitra fa hoe an’ny tena avokoa ny olom-boafidy rehetra, efa sarin’ny fionganan’ny tena izany”, hoy ihany izy.
Mamono tena ny HVM
Mitantana fanjakana ho amin’ny fampandrosoana sa fahefana hanjakan-tokana fotsiny ny HVM amin’izao? Fahalemena politika fa tsy hery hitanana fahefana maharitra ny fanjakazakana tokana, saika miafara amin’ny jadona na fampihorohoroana aza: famonoan-tena politika.
Mandeha an-jambany amin’ny ataony hatrany ny mpitondra sy ny antokony amin’izany, mitompo teny fantatra. Na tsy mihaino sy ny tsy miraharaha ny hafa… Tsy hahamarin-toerana sy hampitony izany, fa tsy hisy adihevitra sy ny fifandanjan-kery politika. Voatsindry ila hatrany izay atao rehetra. Na hitsingevana ho azy?